आँखा किन फर्फराउँछ ? कसरी रोक्ने ? | latestnepali.com
सुधिर र रेश्मा अभिनित रचना रिमालको ‘पर्नु पिर पर्‍यो’ सार्वजनिक ( भिडियो )... १७ मिनेट अगाडि
आँखा किन फर्फराउँछ ? कसरी रोक्ने ?
कहिलेकाहीँ मानिसहरुको आँखा अचानक फर्फराउन थाल्छ । आँखा फर्फराएपछि शुभ/अशुभ हुने भावनामा बहकिन्छन्- मान्छेहरु । पुरुषको दाहिने र महिलाको देब्रे आँखा फर्फराउनुलाई शुभ मान्ने गर्छन् मानिसहरु ।
अझ आँखा फर्फराउँदा ज्योतिष शास्त्रसँग जोडेर मानिसहरु दाहिने आँखा फर्फराउँदा शुभ हुने, देब्रे फर्फराउँदा अशुभ हुने आदि इत्यादि फलादेश गर्छन् । वास्तवमा यो भ्रम मात्रै हो । ज्योतिष शास्त्रले यस्ता विषयको फलादेश गर्दैन । ज्योतिष शास्त्रले मानिसहरुको भूत, वर्तमान र भविष्यको बारेमा फलादेश त गर्छ । तर कुनै न कुनै आधारलाई टेकेर मात्र ।
सिद्धान्त ज्योतिषबाट आकाशीय पिण्डहरुको गति, दूरी लगायत वर्षको गणना गरिन्छ । भने फलित ज्योतिषमार्फत फलादेश गरिन्छ । फलित ज्योतिषबाट फलादेश गर्दा केही न केही तथ्यमा आधारित रहेर नै गरिने हुँदा उसका जीवनका विविध घटनाहरुको बारेमा जानकारी पत्ता लगाउन सकिने हो।
तर, आँखा फर्फराउनु भनेको सामान्य बुझाइमा स्वास्थ्यको समस्या हो । आँखा वरिपरिका मांशपेशीहरू संकुचित हुँदा आँखा फर्फराउने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसका केही कारणहरु यस्ता छन् ।
थकान र तनावका कारण आँखा फर्फराउँछ । तनाव कम गर्न सक्नुभयो भने आँखा फर्फराउन बन्द हुन्छ । राम्ररी निद्रा पुगेको छैन भने पनि आँखा फर्फराउँछ । त्यस्तै, धेरै मादक पदार्थ सेवन गर्दा पनि आँखा फर्फराउँछ । धमिलो बत्तीमा काम गर्दा तथा लामो समयसम्म कम्प्युटरमा काम गर्दा पनि आँखा फर्फराउँछ ।
आँखा फर्फराउँदा रोक्नको लागि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । शरीरलाई आराम हुनेगरी सुत्नुहोस् । आँखाको मसाज गर्नुहोस् । आँखीभौंलाई ३० सेकेन्डसम्म झिम्क्याउनुहोस् । एक हप्ताभन्दा बढी समयसम्म पनि आँखा फर्फराइरह्यो भने आँखा सम्बन्धी केही समस्या हुने भएकाले चिकित्सकको परामर्शमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
समुद्रमुनिको मन्दिरमा भेटिए हिन्दू देवीदेवताका यी मूर्तिहरु